ON dia manampy amin'ny SiC MOSFETs - Infinity-Electronic
HomeNewsON dia manampy amin'ny SiC MOSFETs
ON Semiconductor dia nampiditra roa SiC MOSFETs mikendry ny EVs, masoandro ary UPS.
Ny sekoly indostrialy NTHL080N120SC1 sy ny sokajin'ny automotive AEC-Q101 NVHL080N120SC1 dia feno SiC diodes ary SiC mpamily, fitaovana simulation fitaovana, modely SPICE ary fampahafantarana fampiharana.
Ny IS 200 Volt (V), 80 milliohm (mΩ), ny SiC MOSFETs dia miteraka lozam-pifamoivoizana ambany, diode mitana haingana dia haingana amin'ny fihenan'ny famerenam-bidy kely ambany, izay manome fihenam-bava maivana ary manohana ny fihenan'ny haavony kokoa sy ny haavony mahery kokoa, ary ny ambany Eon ary Eoff / haingana dia hikosoka ON sy OFF miaraka amin'ny tebiteby faratampony mba hampihenana ny fahaverezan'ny herinaratra ary noho izany ny fepetra takiana.
Ny kapila ambany dia manohana ny fahafahana miova amin'ny fahita matetika izay mampihena ny olana mahakasika ny EMI; Mandritra izany fotoana izany, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fahaverezan'ny lavaka, ary ny hentitra amin'ny fihodinan'ny fivoahana dia mampitombo ny herim-po amin'ny ankapobeny, manome ny fahamendrehana bebe kokoa sy ny faharetan'ny fotoana maharitra.
Ny tombontsoa fanampiny amin'ny fitaovana MOSFETSiC MOSFET dia rafitra fanesorana izay manampy amin'ny fahamendrehana sy ny fahamendrehana ary mampitombo ny faharetan'ny asa.
Ny NVHL080N120SC1 dia natao mba hanoherana ny rivotra mahery vaika ary manolotra fepetra goavambe ambony sy mavesatra amin'ny farim-piafenana fohy.
Ny fepetra AEC-Q101 an'ny MOSFET sy ny fitaovan'ny SiC hafa dia manome, dia azo antoka fa azo ampiasaina tanteraka amin'ny fitomboan'ny fampiharana amin'ny fiara izay mihombo noho ny fitomboan'ny votoatin'ny elektronika sy ny fanodikodinan'ny powertrains.
Ny hafanana ambony indrindra amin'ny 175 ° C dia mampitombo ny fahaiza-manaon'ny fampiasana amin'ny famolavolana fiofanana sy ny programa hafa hafa izay mampiakatra ny mari-pahaizana tandindomin-doza.